အောင်သက်မန်း - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၉ ဇွန် ၁၉၇၇&#၁၆၀;(၁၉၇၇-၀၆-၁၉) (အသက် ၄၄)
အောင်သက်မန်း (၁၉၇၇ ဇွန် ၁၉ ဖွား) သည် မြန်မာလူမျိုး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဖြစ်သည်။
၃ နိုင်ငံတကာ ပိတ်ဆို့မှု
၁၉၇၇ ခု ဇွန်လ ၁၉ ရက်တွင် ဗိုလ်ကြီး ရွှေမန်းနှင့် ဒေါ်ခင်လေးသက်တို့မှ မွေးသည်။ မွေးချင်းမှာ ညီတော်စပ်သူ တိုးနိုင်မန်း ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၃ ခန့်တွင် အထက်တန်းအောင်မြင်ပြီး ရန်ကုန် စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်သည်။
ကျောင်းပြီးသည့်နောက် ၁၉၉၇ ခုတွင် ဦးတေဇပိုင် ထူးကုမ္ပဏီ၌ အလုပ်ဝင်သည်။ ၁၉၉၈ ခုတွင် ဖခင်ဖြစ်သူ ဗိုလ်မှူးချုပ် သူရရွှေမန်းက အနောက်တောင်တိုင်း စစ်တိုင်းမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းစဉ် ရေနက်ကွင်းနှင့် မြေလွတ်မြေရိုင်းဖော်ထုတ်ရေး စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်သည်။ ထူးကုမ္ပဏီအုပ်စုမှ ဧရာရွှေဝါကုမ္ပဏီအဖြစ် လုပ်ငန်းခွဲကာ အောင်သက်မန်းက ဦးစီးပြီး ထိုစီမံကိန်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
နေပြည်တော်မြို့သစ် တည်ဆောက်သည့်အခါတွင်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၈ ခု၌ မော်လမြိုင်ဈေးသစ် ပြန်ဆောက်ရာတွင်လည်းကောင်း ဧရာဟင်္သာ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ တည်ထောင်ကာ လုပ်ကိုင်သည်။
၂၀၀၅ ခုတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှင့် စင်ကာပူသို့ ဆန်တင်ပို့ခွင့် ဧရာရွှေဝါက ပထမဆုံး ရသည်။ ဧရာရွှေဝါသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ တွင်းသင်းတိုက်ဝန်ဦးထွန်းညိုလမ်းတွင် စက်ရုံတည်ကာ ပဲအမျိုးမျိုးကိုလည်း ပြည်ပသို့ တင်ပို့လျက် ရှိသည်။
လောင်စာဆီ တင်သွင်းသူနှင့် ဖြန့်ဝေသူများအသင်းတွင် ဒုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူလျက် ရှိသည်။
အာဏာရှင်များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ခြင်းကြောင့် ၁၉၉၈ ခုမှစ၍ ဥရောပသမဂ္ဂက စီးပွားရေးအရ ပိတ်ဆို့ထားသည်။ 
↑ "Shwe Mann". Alternative Asean Network on Burma.
↑ Amending Restrictive Measures against Burma/Myanmar
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အောင်သက်မန်း&oldid=475020" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၀၇:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။